Beddelaan Tezos (Pre-Launch) In US dollar
Updated 19/01/2020 08:19
Beddelka Tezos (Pre-Launch) In US dollar. Tezos (Pre-Launch) qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
1 Tezos (Pre-Launch) = 1.40 US dollar
Macluumaadka ku saabsan isu beddelka Tezos (Pre-Launch) illaa US dollar ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Tani waa tixraac ku saabsan heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. 1 Tezos (Pre-Launch) hadda waa 1.40 US dollar. Qiimaha 1 Tezos (Pre-Launch) wuxuu hadda la mid yahay 1.40 US dollar. Heerka Tezos (Pre-Launch) sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego US dollar ee -653 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
Tezos (Pre-Launch) qiimaha maanta
Heerka Sarrifka Tezos (Pre-Launch) In US dollar
Usbuuc ka hor, Tezos (Pre-Launch) waa la iibsan karaa 1.31 US dollar. Lix bilood ka hor, Tezos (Pre-Launch) waxaa lagu badali karaa 1.05 US dollar. Sadex sano ka hor, Tezos (Pre-Launch) waxaa lagu iibin karaa 0 US dollar. 6.91% toddobaadki - isbeddelka heerka sarrifka Tezos (Pre-Launch). -10.52% bishii - isbeddelka heerka sarrifka Tezos (Pre-Launch). Sannadkii oo dhan, Tezos (Pre-Launch) illaa US dollar sicirka sarrifka oo is beddelay 229.4%.
Tezos (Pre-Launch) (XTZ) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
Tezos (Pre-Launch) ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican Tezos (Pre-Launch) qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso Tezos (Pre-Launch) maanta.
HitBTC XTZ/BTC $ 3.61 $ 504 625 0.209457 %
Gate.io XTZ/USDT $ 3.64 $ 2 511.01 0.005115 %
HitBTC XTZ/USDT $ 3.63 $ 391 979 0.1627 %
HitBTC XTZ/ETH $ 3.60 $ 220 108 0.091361 %
Isbedelka Tezos (Pre-Launch) ugu fiican dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital Tezos (Pre-Launch) US dollar
Tezos (Pre-Launch) (XTZ) In US dollar (USD)
1 Tezos (Pre-Launch) 1.40 US dollar
5 Tezos (Pre-Launch) 6.98 US dollar
10 Tezos (Pre-Launch) 13.96 US dollar
25 Tezos (Pre-Launch) 34.91 US dollar
50 Tezos (Pre-Launch) 69.81 US dollar
100 Tezos (Pre-Launch) 139.63 US dollar
250 Tezos (Pre-Launch) 349.07 US dollar
500 Tezos (Pre-Launch) 698.14 US dollar
Maanta, 10 Tezos (Pre-Launch) waxaa lagu iibin karaa 13.96 US dollar. Hadaad leedahay 25 Tezos (Pre-Launch), ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu badelayaa 34.91 US dollar. Maanta, 50 Tezos (Pre-Launch) waxaa lagu iibin karaa 69.81 US dollar. Waad ku badali kartaa 100 Tezos (Pre-Launch) ee loogu talagalay 139.63 US dollar . Si loogu badalo 250 Tezos (Pre-Launch), 349.07 US dollar are are loo baahan yahay. Beddelashada 500 Tezos (Pre-Launch) qiimaha 698.14 US dollar.
Tezos (Pre-Launch) (XTZ) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan XTZ/ETH maanta 19 January 2020
19/01/2020 1.48 0.02732 ↑
18/01/2020 1.46 -0.0014 ↓
17/01/2020 1.46 0.13 ↑
16/01/2020 1.33 -0.066109 ↓
15/01/2020 1.39 0.085078 ↑
19 January 2020, 1 Tezos (Pre-Launch) kharashyada 1.482906 US dollar. 18 January 2020, 1 Tezos (Pre-Launch) = 1.455586 US dollar. Tezos (Pre-Launch) ilaa US dollar ee 17 January 2020 - 1.456985 US dollar. Ugu badnaan Tezos (Pre-Launch) to Heerka US dollar heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 19/01/2020. Heerka ugu yar Tezos (Pre-Launch) ilaa US dollar sicirka sarrifka ee wuxuu ku jiray 16/01/2020.
Tezos (Pre-Launch) (XTZ) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Tezos (Pre-Launch) iyo US dollar
Tezos (Pre-Launch) codka lacagta digital XTZ. Tezos (Pre-Launch) ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 03/10/2017.